INDLU YENYOKA YEXESHA LOKUQALA UMHLA WOKUKHUTSHWA, ISAMENTE, IPLANI, ITRAILER KWAYE YINTONI ESINOKUYILINDELA KWIMBALI? - IINKQUBO ZETV
I-HBO ekugqibeleni ibhengeze ukuba iyasebenza kumdlalo weTrones prequel uthotho olujolise kwiTargaryens, yi
I-HBO ekugqibeleni ibhengeze ukuba isebenza kumdlalo weTrones prequel uthotho olujolise kwiiTargaryens, ngegama leNdlu yeNamba.
Uthungelwano lwenze ingxelo esemthethweni kwakamsinya emva kweengxelo ezaphulwayo ukuba kusenokwenzeka umboniso omtsha we-prequel. Kwaye ejolise kwi-Age of Heroes kunye neenkwenkwezi uNahomi Watts, ayisayi kubakho kuthotho.
Iingxelo zaqala ukubonakala ngo-Septemba ngo-2019 yokuba i-HBO isondele eku-odoleni umqhubi wenqwelomoya ojolise eTargaryen. Ngoku, emva kokuba nombono ocacileyo wento egcinelwe uthotho lomlilo. Ke, nantsi yonke into oyaziyo malunga neNdlu yeNamba ukuza kuthi ga ngoku.
Indlu yeNyoka yeXesha loku-1: Umhla wokuKhutshwa
Kwii-TCAs zowe-2020, umongameli weenkqubo ze-HBO u-Casey Bloys uyayicacisa loo nto Indlu yeNamba iya kukhulula kwiminyaka emibini. Ke abalandeli kufuneka balinde kancinci.
Umxholo webali usekwe kwiNcwadi yoMlilo kunye neGazi.
Ixesha likaMartin malunga nexesha elidlulileyo leNdlu iTargaryen laqala ukubhengezwa ngo-Novemba ngo-2018. Iya kubonelela ngemithombo yolwazi kuthotho oluzayo. Ibali liqala iminyaka engama-300 ngaphambi kweziganeko zeMidlalo yeTrone, siyazi. Ngokwengqungquthela yayo, ibandakanya iimfazwe ezibalulekileyo njengoMdaniso weDragons (imfazwe yamakhaya yaseTargaryen) kunye nesiphumo seDoom yaseValyria.
Iziqendu ezili-10 zizonke ezidalwe nguRyan Condal
Umbhali wesikrini uRyan Condal wachaza umboniso wangaphambili we-USA Network Colony. Kunye nemiboniso bhanyabhanya yesenzo Rampage (2018) kunye neHercules (2014). Bobabini bephosa uDwayne Johnson. Uya kubhala i-House of the Dragon uthotho, awayecinga ngalo kunye noMartin, kwaye asebenze njenge-co-showrunner kunye noMlo we-Bastards director uMiguel Sapochnik.
UMlawuli weMidlalo yeTrone uMiguel Sapochnik uya kuba negalelo elikhulu.
Uncedise ezinye zeziqendu zemfazwe eziphambili zeGoT. Ibandakanya iHardhome, iMfazwe yeBastards, (ephumelele imbasa yeEmmy). Ubusuku obude, kunye neeBell (idabi lesibhozo lesibhozo e-King's Landing).
Ngelixa esebenza njenge-co-showrunner, uya kuqondisa umqhubi wenqwelomoya-kunye nezinye iziqendu ezimbalwa.
UGeorge R. R. Martin uzakuba yinxalenye yeprojekthi.
Ekukhutshweni kwebhlog yakhe malunga nezihloko, umbhali weNgoma yoMlilo kunye noMlilo wathi uya kubandakanyeka kuthotho olutsha. Nangona kunjalo, de kube ugqibile ukubhala. Incwadi yesithandathu ngolandelelwano ekudala ilindelwe. Kwakhona, oko kwenza umdlalo wokuqala weTrones.
Umboniso unokuvuselela ezinye zeendawo zokudubula zomdlalo weTrone.
Kwingxelo yebhlog yakhe ngothotho oluzayo, uMartin ucebise ukuba unokuphinda atyelele amazwe asebenza njengendawo yokufota iMidlalo yeTrone. Ibandakanya iIreland, iIceland, iScotland, iCroatia, iMorocco, iMalta neSpain.
Indawo enokubakho kwiNdlu yeeDragons
Indlu yeNamba sele ikhona kwimisebenzi yokukhangela i-cast. Nangona kunjalo, ukwahlukana kwe-cast akukabonakali. Kwangelo xesha, ababukeli ngokuqinisekileyo baya kuba bechaza ukuba yeyiphi iTargaryens eya kuvela kuthotho. Uqikelelo kukuba iindima eziphambili zinokubandakanya uKing Viserys I, uPrincess Rhaenyra Targaryen, uKumkanikazi u-Alicent Hightower, kunye no-Aegon II Targaryen. Kodwa oko kuhlala kungaqinisekiswanga.
Indlu yamakhadi exesha lesi-7 Umhla wokuKhutshwa, isiQendu, isiQendu, iTrailer kwaye ngaba sinokubona ubuso obutsha kwiisizini ezizayo?
Ixesha lakhe leZinto eziMnyama ezi-2: Amarhe malunga noMhla woMoya wawo kunye neethiyori ezintsha, Iindaba ezizayo, amathuba, uHlaziyo lwamva nje, kunye nePloti omele uyazi
iphuma nini i-jujutsu kaisen anime
Iimuvi ezinje ngee-shades ezingama-50 ezingwevu
Imiboniso bhanyabhanya ehlekisayo kunye neyentshukumo
Umhla wokukhutshwa kwesambrela esikolweni
ukulungele ukuthanda isizini 1 cast apho bakhoyo ngoku